Religious Ogidi ọcha kandụl - China Litbright kandụl (shijiazhuang)
Basic Info Model No .: G25-0830H Type: tapered ihe: paraffin Wax ojiji: olili ozu, Holiday, SPA, Religion, Wedding, Party, Birthday, Home Lighting, Ịchọ Mma Function: Lighting agba: White flavor: Unscented Size: 7 * 10cm Burning Time: 8H nhazi: akpụzi Long Burning Time: Iche Iche igbe nkwakọ agbakwunyere Info packaging: igbe nkwakọ Productivity: tọn 30 Brand: Litbright Transportation: Ocean, Land, Air Ebe nke Si Malite: China Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20 'fcl kwa ụbọchị Certificate : Bs ...
Ịdị No .: G25-0830H
Long Burning Time: Iche Iche igbe nkwakọ
Arụpụtaghị: tọn 30
Tụkwasịnụ Ikike: 3 × 20 'fcl kwa ụbọchị
Akwụkwọ: BSCI BV OA
Bright kandụl bụ paraffine wax, ọ bụ na agba na-acha ọcha, N'ezie ị nwekwara ike ịhọrọ ndị ọzọ na agba. Anyị niile na-eme 8 ibe kwa igbe 30 igbe kwa ctn, ma ọ bụ 50 igbe kwa ctn mbukota. Gị onwe gị na ika na-anara. Nke a kandụl na-eji maka nri abalị oge, ìhè icho mma gị na ụlọ nnọọ ihunanya na ị ga-zuru ike onwe gị mgbe gị na nri abalị oge, kandụl nweghị isi ma ọ bụ na ọ dịghị anwụrụ ọkụ.
Type: egbuke egbuke kandụl
Iji: Religious Activities
Ebe nke Si Malite: Ọ bei, China (Chile)
6pcsx60box, 8pcs x 30boxes / ctn nakwa dị ka ndị ahịa na-achọ.
Production ikike: 4x20ft / ụbọchị
na anyị nwere nnọọ ngwa ngwa nnyefe oge,
àgwà na ihe ezi uche price.
Previous: Cotton oriọna na paraffine wax kandụl
Next: White kandụl si 10g ka 100g
White kandụl si 10g ka 100g
2018-ewu ewu imewe flameless ọcha ezinụlọ c ...
Factory price kwa ụbọchị na-unscented ọcha househo ...